Kuhlehliswe imidlalo yama-Olympic ka-2020 ngenxa yeCorona
nduduzo dladla | March 25, 2020
OWAYENGUMBHUKUDI wakuleli odumile uCameron van der Burgh uthi usephile negciwane iCoronavirus izinsuku ezingu-15.
Kwenzeka lokhu nje izolo imidlalo yama-Olympic obekulindele ukuthi idlalelwe eTokyo ngoJullayi ihlehlisiwe, izodlalwa ngonyaka ozayo, ngenxa yaleli gciwane.
Lo mbhukudi, othathe umhlalaphansi ngo-2018, ukhunjulwa kakhulu ngo-2012, ngesikhathi ehlabana ngendondo yegolide kuma-Olympic, ebhukuda kwi-100m breakstroke.
UVan der Burgh (31) uchaze ukuphathwa yileli gciwane eselidumise okwemali, njengento enzima kunazo zonke empilweni yakhe, nathe akafiseli muntu ukuthi ehlelwe yile nkiyankiya.
Babalelwa emakhulwini amahlanu abantu asebehaqwe yileli gciwane kuleli, selokhu libhedukile emasontweni edlule.
Ekhuluma nabalandeli bakhe kwiTwitter, uVan der Burgh uthe uzizwa engumqemane, egcizelela ukuthi akabhemi ugwayi okwenza amaphaphu akhe asebenze kahle.
“Sengiphile naleli gciwane izinsuku ezingu-14 (esho ngoMsombuluko). I-Corona iyethusa kakhulu nakuba ngazi kahle ukuthi ngiphile saka, angibhemi namaphaphu ami asebenza kahle. Kuyasiza kakhulu ukuphila impilo edle ngokuzivocavoca ngoba kwenza izifo zingakuxaki kakhulu,” kusho uVan der Burgh.
Ngenxa yaleli gciwane kuvalwe yonke into kuleli kusuka ngoLwesihlanu esiya kulona, kuze kube ngu-Ephreli 16.
Lena ngenye yezindlela uhulumeni azama ngayo ukunqanda lolu bhubhane. Izitolo nezinye izindawo ezihlanganisa abantu abaningi zizovalwa njengoba kunxenxwa abantu ukuba bahlale emakhaya. Kulabo abayiziphula mthetho uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uveze ukuthi amasosha namaphoyisa bazoqikelela ukuthi okumele kuvalwe kungasebenzi, ngempela kuyavalwa.
Eqhubeka echaza, uVan Der Burgh, uthe uyezwelana kakhulu nabasubathi abaziphilisa ngezemidlalo njengoba leli gciwane libhokile umhlaba wonke jikelele.
“Ngenxa yokubanjwa yileli gciwane, ngishintshe indlela yokuphila. Kunganzima kakhulu kubasubathi uma bengahaqwa yileli gciwane njengamanje ikakhulukazi uma kuza umqhudelwano omkhulu,” kusho uVan der Burgh.
Ebholeni lezinyawo kuvalwe ngehlahla njengoba wonke amaligi ahlonishwayo emhlabeni kubalwa nePremier Soccer League (PSL), emisiwe.